'အပြာရောင်ဘောလုံး' သို့မဟုတ် 'ချစ်သူများ' အခွံမာများကော။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ဤရွေ့ကားမဟုတ် များသောအားဖြင့် သင်က“ edging” မဟုတ်လျှင်အော်ဂဇင်၏အစွန်းနားနှင့်နီးကပ်စွာနီးကပ်လာခြင်းသို့မဟုတ်သင်မကြာခဏ masturbating ပြုလုပ်ပြီးနောက်ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းနှင့်စတင်ခြင်းသာမဟုတ်ပါ။ ဝါရင့်တစ်ယောက်ပြောခဲ့သည်
သငျသညျမသိစိတ်သင့်ရဲ့ PC မှာကြွက်သားအုပ်စုကိုတင်းကျပ်လျက်ရှိသည်။
သင်သည်အဘယ်သို့အစားလုပ်ချင်သည်သင်၏ perineal ဧရိယာပေါ်တွင်သင်၏အာရုံကိုညွှန်ကြားသည်။ သင့်ရဲ့ကပ်ပယ်အိတ်၏ဧရိယာ။ ရုံရှိသင့်ရဲ့အာရုံကိုညွှန်ကြားခြင်းနှင့်အပန်းဖြေ။ သငျသညျလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်းအခါအဲဒီမှာသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို directing ဆက်လက်။
PMO မပါဘဲခဏတာသွားပြီးနောက်အပြာရောင်ဘောလုံးကိုမလွှဲမရှောင်ရသောအခါငါနှင့်သာကိုင်တွယ်ရမည်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးမှာကွယ်ပျောက်တတ်၏။ တကယ်တော့ငါလိင်အကြောင်းကိုလိင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်တံဆီသွေးစီးဆင်းနေခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါအကြှနျုပျ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေစောင့်ကြည့်မှာပိုကောင်းလာပြီ။
ဒါကဖြစ်သည့် (EDGE သောသူတို့အဘို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည် အကြောင်းပြချက်စာရေးဘို့အန္တရာယ်များစိတ်ကူး):
varicoceles ကြောင့်ငါ့ဘောလုံးအမြဲနာနေတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုအများကြီးနှောင့်အယှက်။ ဒါပေမယ့်ငါ nofap စလုပ်တုန်းကတစ်ပါတ်အတွင်းမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ “ Yodelout” blog သည် varicocele နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်ခဲ့သည်။ အသိအမှတ်မပြုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ရေကျောက်ရောဂါနှင့်ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနာကျင်မှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဘောလုံးထဲတွင်နာကျင်မှုမရှိသောအခါကျွန်ုပ်မည်သို့ခံစားရမည်ကိုသင်နားလည်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အရမ်းကြီးတယ် varicocele ၏စိမ်းပျောက်ကွယ်မထားဘူးသော်လည်း။ ရောင်ရမ်းခြင်းသည်အရင်ကဲ့သို့မကြီးမားပါ။ ငါစွန်းလိုက်တိုင်းနာကျင်မှုကပြန်လာတယ် ဤသည် edging နှင့် varicocele အလွန်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းကြီးမားသောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်နာကျင်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်၊ NoFap ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေတော်မူ၏။4လ Journey, 61 နေ့က Streak (စိုစွတ်သောအိပ်မက်၏ချွင်းချက်)
တစ်ဦး lukewarm ရေချိုး / ရေချိုးခန်းယူပြီးပြုသကဲ့သို့ငါသည်အကြောင်းအေး (မရေခဲ-အအေး) တကယ်ကူညီပေးခဲ့သည်ရေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လုံးဝ unsexy အကြောင်းအရာများစဉ်းစားသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ [ကြည့်ရှုပါ Flashbacks နှင့်တဏှာနှင့်အတူဖြေရှင်းဘို့အပိုဆောင်း Techniques။ ] အဆိုပါနာကျင်မှုခဏအကြာတွင်နိမ်မည်အကြောင်း, အဲဒါကိုကျိုးနပ်သည်။
အပြာရောင်ဘောလုံးများ။ ။ ရက်အတော်ကြာပြီးနောက်သင်၏လိင်တံသည်အလွန်အထိခိုက်မခံဖြစ်လာနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်သင်သည်ခက်ခဲသောအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်ရက်ပေါင်း ၉၀ အားခက်ခဲသောအခြေအနေတွင်ရွေးချယ်ခြင်းထက်အခြေအနေမှန်အရလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဒစ်ကိုထိရုံသက်သက်သာသာဖြစ်သည့်အထိရောက်သွားနိုင်ပြီးမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များပင်ဖြစ်ပါစေသင်မတော်တဆအနားသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။ အလေးသာသည်၊ သင်၏ nofap ခရီးစဉ်၌ vasocongestion (အပြာရောင်ဘောလုံး) များကိုသင်တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။
ငါဖယ်ရှားဖို့ငါရှာတွေ့နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ရေအေးသောက်ပြီးငါ့လက်ကိုခတ်ပြီးရေအေးကိုဖမ်းကာငါ့ရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးကုသနည်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အဆင်ပြေပြီးပျော်စရာမဟုတ်သော်လည်းအပြာရောင်ဘောလုံးများလည်းမဟုတ်ပါ။ အအေးမိရေပန်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကူညီနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤတွင်မသွားတော့သောပိုကောင်းသောပို့စ်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်သုတေသနအရ FYI, vasocongestion သည်အမျိုးသမီးများအားလည်းထိခိုက်နိုင်ပြီး Clitoris၊ Labia နှင့်ယောနိ၏အပြင်ဘက်သုံးပုံတစ်ပုံကိုပါအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အအေးမိရေပန်းများသည်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆေးကုသမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းမည်သည့်အချက်ကအတည်ပြုပေးသနည်း၊
ထိုအခြေအနေအတွက်ကုထုံးတစ်ခုမှာအဆင်မပြေသည့်အခါတိုင်းလိင်အင်္ဂါများမှစီးဆင်းနေသောရေအေးဖြစ်သည်။ Stanley Bass သည်ထိုနည်းစနစ်ကိုသူ့စာအုပ်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည် orgasm သန်း သာ. ကောင်း၏:
"ဒီထိန်းသိမ်းထားသုတ်ရည် [p ဖြစ်ကူညီပေးနေသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေသတွင်မဆို sensitivity ကို, စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့မှုကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ 54] ခန္ဓာကိုယ်နှင့်တုံးမှာတက်စေ့နေဖြင့် reabsorbed ။ ဒါကပေမယ့်ချန်ထားရှိသမျှသောအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့သူမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမလိင်ခဲ့ရုံလျှင်အဖြစ်, လူသည်ထိုနောက်မှဿုံပုံမှန်တို့နှင့်ကြီးသောခံစားရဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ... ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးပြုကြောင့်ကောင်းမကောင်းလိင်ပြီးနောက်အားလုံးတင်းမာမှုကနေအခမဲ့ခံစားရဖို့အမြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးမှားယွင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တွေ့ပြီ။ သငျသညျနှိမ့်ချအအေးမထားဘူးဆိုရင် ... သင်ကအနည်းဆုံးတစ်ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်နောက်မှ, sex အကြောင်း obsessive ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ... ဒါပေမယ့်ငါကပူလိင်ပြီးနောက်ငါ့ကိုချငြိမ်သက်သွားသည့်ရေအေးကိုအသုံးပြုတစ်ကြိမ်။
မကြာခဏငါ orgasm ဖို့နီးကပ်လွန်း သွား. သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲရပ်တန့်လျက်, လိင်အဲဒီမှာအဆုံးသတ်လျှင်, ငါသည်ရံဖန်ရံခါလေ့ "ကိုနှစ်သက်မယ့်အခွံမာသီး" သို့မဟုတ် "blueballs" ဟုခေါ်, ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေသနှင့်ဝှေးအတွက် sensitivity ကိုတွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မယ်။ လာသောအခါ ကျွန်မဘာမျှမပွုခဲ့လျှင်အစဉ်အမြဲတဖြည်းဖြည်းလျော့ခြင်းနှင့်3နာရီအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ ငါရေအေးကုသမှုကိုအသုံးပြုပါကချက်ချင်းများနှင့်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။
6 ။ out.7 ရယူပါ။ ချွတ်ခန်းခြောက်။
ကျွန်မအလုပ်အပြီးအပြေး ဝင်. , နာကျင်ကိုက်ခဲနောက်မှမှေးမှိန်ခဲ့ကြပုံရသည်။
ငါသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် (သင်၏ဘောလုံးပေါ်ရှိကွိုင်ပြွန်ရောင်ခြင်း) ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ငါပြောနိုင်တာက၊ ငါ့အစာအိမ်ကိုစဖွင့်တုန်းကငါခံစားခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုကငါ epididymitis ရှိခဲ့သလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ရေအေးတွေအစား၊ မျက်နှာသုတ်ပဝါတစ်ထည်နဲ့ပတ်ထားတဲ့ ICepack တစ်ခုကိုသုံးပြီးအိပ်ယာခင်း၊ ထိုင်တဲ့အခါအိပ်ရေးဝဝအောက်မှာကပ်ထားပါ။ ပူနွေးသောရေချိုးခြင်းနှင့်သင်၏ဘောလုံးကိုရေပေါ်မျောပါခြင်းတို့သည်နာကျင်မှုကိုမြင့်တက်စေသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ နေ့ ၄၀ လောက်မှာငါ့ရည်းစားကငါ့ကိုထွက်သွားပြီးနောက်အပြာရောင်ဘောလုံးတွေပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ငါပြaနာမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါကအခြားအော်ဂဇင်မပါဘဲ ၃ ပတ်သွားခဲ့တယ်။ permalink
ဤသည်နံနက်ငါတစ်ကိုယ်တော်စွမ်းအင်လှုပ်ရှားမှုများအချို့ကြိုးစားခဲ့: Yoni Mudra။ ဒီတစ်ခုကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ထူးဆန်းတဲ့အကျိုးဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဆီးပြီးနောက်သုတ်ရည်ယိုစိမ့်သတိပြုမိသည်။ [နောက်နေ့] ကျွန်ုပ်၏ဆီးကြိတ်သည် ပို၍ သက်သာသည်။ ၀ န်ထုပ် ၀ ယ်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်းခံစားမှုသည်အာရုံပျံ့လွင့်ပြီးသက်သာရာရရန်တောင်းပန်သည်။ အတိတ်ကာလကဤသို့ပြုရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ O. ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် O. ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိဘဲသက်သာစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။
ငါအရမ်းပူနွေးသော (သို့) ပူသောရေပန်းများ (တစ်စုံတစ်ရာကိုမီးမွှေးနိုင်လောက်အောင်ပူခြင်းမရှိသည့်) သို့မဟုတ်ရေချိုးခြင်းသည်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ အပြာရောင်ဘောလုံးများသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်အလွန်ပူသောရေသည်လည်ပတ်မှုကိုအားပေးသည်။ ဒီဟာကပိတ်ဆို့မှုကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။
ဖြေရှင်းနည်းမှာလိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းသင့် PC ကြွက်သားများကိုပိတ်ဆို့ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကိုဖြေလျှော့ပြီးအပြာဘောလုံးများကိုသင်ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်ည (၅ ရက်) တွင်ကျွန်တော်သည်အပြာရောင်ဘောလုံးများနှင့်ပတ်သက်သောအမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အရာအားလုံးငါမှာ edging မခံခဲ့ရပါဘူး။ တစ်နေ့ကတည်းကကျွန်ုပ်လိင်တံကိုပင်လက်တောင်မကိုင်နိုင်ခဲ့ပါ။ ငါဖုန်းပြောပြီးသူငယ်ချင်းမိန်းကလေးနှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ သူမသည်သူမအားသူမ၏အသံဖြင့်လှည့်စားသည်။ သူမသည်သူမသဘာဝအတိုင်းလုပ်နေတာ, သူမဘက်မှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမဟုတ်ပါဘူး။ သူကအရမ်းနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊ လက်အောက်ခံပြီးငါ့ကိုဆွဲဆောင်တယ်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးဒီပျော့ပျောင်းတဲ့အရသာထဲမှာ 'hello' လို့အမြဲပြောတတ်တယ်။ တကယ်တော့ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆွဲဆောင်ခံရပေမယ့်သူမအဝေးမှာနေတယ်။ ငါအခုအချိန်မှာဆက်ဆံရေးမဖွစျနိုငျဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဖုန်းပေါ်မှာအများကြီးစကားပြော။ ဒါပေမယ့်သူမ sexy ဖြစ်ပြီးငါကြိုက်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်ကငါ့ကိုလှည့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်မခဲယဉ်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ထိရောက်မှုမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဝှေးစေ့များအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းပါသည်။ ဤအထူးသဖြင့်ရောဂါ (အပြာရောင်ဘောလုံး) များသည်အမြဲတမ်းပြproblemနာဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားယောက်ျားတွေကပြောတာကအချိန်ကုန်သွားတာလို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလည်းတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၌ရှိပါကသူတို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်တိုင်အောင်ဖိအားများမကုန်မချင်းသူတို့နေထိုင်ကြသည်။
သို့သော်လည်းငါသည်အစား, ဒီ site ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်ကြောင်းလမ်းကြောင်းမသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်နှင့်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အခွံမာသီးရစ်ပတ်ရေအေးအတွက်ပြည့်နှက်နေတဲ့ washcloth အနေနဲ့အဖန်ဖန်-ကိုအသုံးပြုကုသဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ ဒါနဲ့ကိုပြု၏, ထို့နောက်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျော်ရေအေးသွန်းလောင်းလေ၏။ ငါ၏အအံ့အားသင့်ဖို့, ထို% 80 မှ 90 နေဖြင့်ထိုပြဿနာကိုကုသပေးခဲ့၏။
1 ။ အဆိုပါပွတ်
ကောင်းပြီဒါကြောင့်သင်ကဒီတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအစီအစဉ်ကိုမဖြစ်လာစေရန်သတိထားဖို့လိုတယ်၊ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အပြာရောင်ဘောလုံးများ၏နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်။ သင်ရုံသင်၏ gents နှင့်သင်၏ပေါင်ခြံ၏ချက်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်surroundingရိယာပွတ်သပ်။ ကျွန်ုပ် reboot လုပ်နေစဉ်တစ်တန်သည်တစ်တန်ကိုကူညီနိုင်ခဲ့သည်ကိုမှတ်မိသည်
2 ။ Kegels
ယခုငါအပြာရောင်ဘောလုံးနှင့်အတူကူညီရန်ကြိုးစားခြင်းအတွက်၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း Kegel လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုလူအများအပြားမှကြားသိခဲ့ရသည်။ ဒီဟာတွေကလေ့ကျင့်ခန်းတွေပဲလေ။ Kegels မှနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကို http://www.webmd.com/urinary-incontinence-oab/kegel-exercises-treating-male-urinary-incontinence တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါကသင့်ရဲ့ဝက်သားဓားကိုပျက်စီးစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူကသင့်ကိုအခက်အခဲတွေပေးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေမှာပါ။ ဤအရာသည်အပြာရောင်ဘောလုံးများကိုတိုက်ရိုက်မကုသနိုင်သော်လည်းသင်၏အမျိုးသမီးသူငယ်ချင်းနှင့်စကားပြောသောအခါ၎င်းသည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သင့်မှာအဆင်မပြေတဲ့အရာတစ်ခုရှိရင်သင်လုပ်ရမယ့်အရာကစက္ကန့် ၂၀ လောက်ကြာအောင်သင့်ခြေထောက်နဲ့ glute ကြွက်သားတွေကိုအပြင်းအထန်ဆန့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ခြေထောက်ကြွက်သားများနှင့်သင်၏“ အခြားခြေထောက်” မှသွေးကိုဆွဲဆောင်ပြီးသွေးယိုစီးမှုဖြစ်စေသည်။ သင်သဘောပေါက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထိုင်။ ထိုင်ပါ။
၁။ တင်ပါးဆုံတွင်းနာကျင်ခြင်း - sacrum တွင် (သင်၏“ တင်းပါး” ကြွက်သားများ (gluteus max) မှထွက်ပေါ်လာသောတြိဂံ boney ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွင်၎င်းအရိုးအောက်ခြေနှင့်သင်ထိုင်နေသောအရိုး (ထိုင်နေသောအရိုးဟုခေါ်သည်။ ischeal tuberosity) သင်သည်သင်၏လက်ချောင်းများကိုယူပြီး၎င်းတို့ကိုအတူတကွ ထား၍ ထိုနေရာတွင်အသာပုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကမှန်ကန်စွာပြုလုပ်နေပါက (နှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းရှိပါက) ဆီးသွားလိုသည့်အလားအလားတစ်ခုဖြစ်သည်။ non-erotic prostate massage ။ သုတ်ရည်လွှတ်မှုသို့မဟုတ် stimulatory effect မဖြစ်စေဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်ဆရာ ၀ န်ကိုဆီးကြိတ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်စေလိုလျှင်၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်ကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ပုတ်တာကငါတုို့တုို့တုို့တုို့တုို့အကြောင်းပြချက်သည်ဆီးကြိတ်မှတဆင့်တုန်ခါမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပျက်သောအရာသည်အမှန်တကယ်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာလိုအပ်ရန်လိုအပ်သည်မှအချို့သောဆီးကျိတ်ကင်ဆာအရည် (အချို့ပိတ်မိနေသောအရည်) မှရိုးရိုးလေးသက်သာသည့်အထိဖြစ်သည်။
2 ။ လွှ palmetto ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အခြားဆီးကျိတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တူတာကိုအမှုအရာပိတ်ဆို့မှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တဲ့သဘောထားကိုသူယောက်ျားအဘို့အထောကျအကူပွုဖြစ်ကြသည်။
အကြှနျုပျ၏ယုံကြည်ချက်ကဒီဆီးကျိတ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုလူတခြို့အတှကျအရိုက်အရာကိုဆက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်လူတခြို့ကပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြပြီးကနဲ့ဘာမှရှိပါတယ် Karezza သို့မဟုတ်သမားရိုးကျလိင်ဆက်ဆံခြင်း။ တကယ်တော့ဒါဟာအရည်တွေထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလုံးပါ ၀ င်တယ်၊ အချို့ယောက်ျားတွေမှာဆီးကျိတ်ကိုဘယ်လိုပုံသွင်းတယ်ဆိုတာစသဖြင့်ပေါ့။ သုတ်ရည်လွှတ်မှုပြီးတဲ့အခါတစ်ခါတလေငါအဲဒီလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ အချို့သောအမျိုးသားများ၏သီအိုရီအချို့သည် overlow Cowlpers gland များရှိသည်နှင့်ယင်းတို့တွင်ကျရောက်လေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့၏duရိယာများ၌ယောက်ျားများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအလွန်များခြင်းနှင့်သူတို့၏productionရိယာများတွင်အရည်ထုတ်လုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုပုံစံအသစ်သို့ (အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောလိင်ဆက်ဆံမှု) သို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှသင်အဆင်မပြေမှုမှေးမှိန်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ မင်းကရေအေးအေးကိုကြိုးစားပြီးစွမ်းအင်ကိုရှူရှိုက်ပြီးပြီဆိုတာမင်းပြောခဲ့တာ။ ဒီနေရာမှာအခြားအကြံပြုချက်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိပါတယ်:
သငျသညျကျင့်သုံးနေချိန်တွင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အစွန်းနီးကပ်လာပြီတှေ့လြှငျတစျခု, karezzaတစ်နည်းနည်းချအအေး။ သင့်ရဲ့စိုက်ထူထားရန်အလုံအလောက်သို့သော်သင်တက်အပူတွေကြောင့်ဤမျှလောက်ဘူး။ အလယ်မှာဇုန်အတွက်နေပါ။
ဒုတိယ၊ သင်၏ရည်းစားအား“ အမြစ်” မှသက်သောင့်သက်သာဖြင့်ထိုးဖောက်ပါ။ ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေ။ အထူးသဖြင့်အော်ဂဇင်မဟုတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်သောအစတွင်ကာရီဇာလေ့ကျင့်သည့်အချိန်၌သင်၏စအိုနှင့်လိင်တံအကြားရှိကြွက်သားများကိုညှစ်ထုတ်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းရှိသည်။ သင်အများကြီးညှစ်လိုလျှင်အပြာရောင်ဘောလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ငါကကြုံတွေ့ကြသောအခါဤဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် pelvic ကြမ်းခင်းကြွက်သားများကိုများသောအားဖြင့်စိတ်အေးလက်အေးထားမည်ဆိုလျှင်စွမ်းအင်သည်မတည်ဆောက်နိုင်သကဲ့သို့အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။ နက်ရှိုင်းစွာနေခြင်းနှင့်အပူမပြင်းခြင်းတို့သည်တင်ပါးဆုံတွင်းကြွက်သားများကိုစိတ်အေးအေးထားရန်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်သည်။ session တစ်ခုတည်းကြာလေလေအပြည့်အဝအနားယူဖို့လွယ်လေလေဖြစ်သည်။
ငါနောက်တစ်နေ့မင်းရဲ့အပြာရောင်ဘောလုံးတွေအကြောင်းကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားမိတော့ငါ့ဇနီးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မကိုထိမိတာကလိင်တံဟာအမျိုးသမီးဆီသုတ်ရည်ပို့ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်အော်ဂဇင်မပြုလုပ်ဘဲရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုမပို့လျှင်ပင်လိင်တံကိုပို့ရန်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်၍ လိင်နှင့်ဆက်ဆံစဉ်တစ်ခုခုပို့ရန်လိုအပ်သည်။ ငါလေ့လာတာကစွမ်းအင်ပို့တာပဲ။
ဒီဟာကနတ်သမီးပုံပြင်လို့ထင်ရပေမယ့်မင်းအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းဆီကိုပို့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာကဒီစွမ်းအင်ကိုလေဖြတ်တိုင်းရဲ့အောက်ခြေမှာပို့ပေးတာပါပဲ။ ဒီလိုမျိုးသွားတယ်၊ ငါအပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အခါငါပြောခဲ့တဲ့ PC ကြွက်သားကိုနည်းနည်းညှစ်လိုက်တယ်။ ငါဆုတ်ခွာဖို့ဝေး, ဤမျှလောက်များစွာသောဖြစ်သည့်အရာ, သာ။ ငါအမြဲညင်ညင်သာသာပေါ့ပေါ့တန်တန်, ညင်ညင်သာသာညှစ်လေ့, ဘယ်တော့မှခက်ခဲဘူး။ သင်အမှန်တကယ်ညှစ်နေလျှင်သင်အနားစွန်းနီးကပ်ရန်လိုသည်။
ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာငါလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမရောက်ခင်တစ်ချိန်ချိန်အနားယူခဲ့တယ်။ ငါအမြင့်ဆုံးထိုးဖောက်မှုရောက်နေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝအနားယူပြီးစွမ်းအင်ကိုပို့ပေးပြီးထိုတွင်ခဏရပ်နားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံစက္ကန့်အနည်းငယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမိနစ်အနည်းငယ်မျှသာ။ အကယ်၍ သင်အာရုံစိုက်မည်ဆိုလျှင်သင်အပြည့်အဝထိုးဖောက်ခြင်း၊ ဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့်အနားယူချိန်တွင်ကြွင်းသောအရာသည်ခဏသာဖြစ်သည့်တိုင်ဤသဘာ ၀“ ပေးပို့ခြင်း” စွမ်းအင်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ လေဖြတ်ခြင်းတိုင်း၏အောက်ခြေတွင်သင်“ ပို့” ပါကတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အပြာရောင်ဘောလုံးများသို့ပို့ဆောင်နိုင်သောစွမ်းအင်ကိုသင်ငုံမိသည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှု၌စွမ်းအင်တစ်နေရာရာသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်သင်တည်ဆောက်ပြီးတည်ဆောက်သည်။ စွမ်းအင်ကိုသုတ်ရည်ပုံစံဖြင့်ထုတ်လွှတ်သည်။ သငျသညျကသုတ်ရည်ထုတ်မပါဘူးဆိုရင်ဘယ်မှာသွားမလဲ? အကယ်၍ သင်ကလေဖြတ်တိုင်းသင့်အမျိုးသမီးအားစွမ်းအင်ဖြင့်ပို့ပါကအပြာရောင်ဘောလုံးများကိုမတည်ဆောက်သင့်ပါ။
အကယ်၍ သင်တို့နှစ် ဦး သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ညှိနှိုင်းနေလျှင်သူမသည်သင်ပို့လွှတ်သည့်စွမ်းအင်ကိုလက်ခံရရှိသည့်ခံစားမှုကိုနှစ်သက်သင့်သည်။ ချစ်သူများအကြားတွင်ထိုသို့ပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းစီးဆင်းမှုသည် Karezza ဖြစ်သည်။ အလွန်ချိုမြိန်သည်။ ဒါ့အပြင်မင်းကတစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီလောက်သွားမယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါကတစ်နေရာရာကိုသွားရမယ့်စွမ်းအင်တွေအများကြီး။
ကာရီဇာနှင့်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုယူပြီး၊ ၎င်းကိုစွမ်းအင် အခြေခံ၍ စွမ်းအင်ကိုအခြေခံသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကဆွဲထားဖို့ခဏကြာတယ်၊ အထူးသဖြင့်သင်နှစ်ယောက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့အတူ။ အကယ်၍ အပြာရောင်ဘောလုံးများသည်ဆက်နေပါကသင်သည်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလအတိုင်းသွားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်လိုပေမည်။ ငါ့ကိုအမှားမလုပ်မိအောင်ငါကအချိန်အတော်ကြာသွားရတာကောင်းတယ်၊ ငါတို့သည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဤသို့ပြုကြ၏။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်လေ့လာသိရှိလာသည်နှင့်အမျှသင်စတင်နိူင်သည်။
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စွမ်းအင်ကိုချက်ချင်း“ ပေးပို့ရန်” မလိုလားပါ။ ငါ "ပေးပို့ခြင်း" ခံစားချက်စတင်ရန်မတိုင်မီအနည်းငယ်ကြာပါတယ်။ ကြာလေလေ၊ ကျွန်ုပ်သည် 'ပေးပို့ခြင်း' စီးဆင်းမှုများလေလေဖြစ်သည်။ ပြီးတာနဲ့ငါတို့ခံစားချက်နှင့်စီးဆင်းမှုအတွက်တကယ်ပါပဲ။ ဘယ်တော့မှညှစ်စရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါများနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်တွေကလုံးဝဖြေလျော့ပေးခြင်းခံရသည်။ ငါသတိထားမိခဲ့သည့်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်အနားယူသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်ဆုံစည်းမိသောအခါသို့မဟုတ်ညှစ်နေသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ပိုမိုတည်မြဲနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါလွှတ်လိုက်တော့ငါ့ရဲ့လိင်တံမှာသူ့ဟာသူလမ်းညွှန်တစ်ခုလိုပဲ၊
အခြားအရာတစ်ခုကတော့ရေအေးနည်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ မင်းအိပ်ရာထဲကအမြန်ထွက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ဝှေးစေ့များသာမကသင်၏ crotch entireရိယာတစ်ခုလုံးကိုတကယ်ပဲသုတ်ခြင်း။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောရေချိုးခေါင်းတစ်လုံးသည်ဤအရာအတွက်တကယ်ကောင်းပါသည်။
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးအလိုရှိ၏။ သင်က၏ Hang ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဖက်နှင့်အတူ karezza ကျင့်သုံးအသက်ရှင်ခြင်းကိုငါ၌ရှိသည်အရှိဆုံးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်ကျေနပ်စရာအတှေ့အကွုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ယူမှုကွေး၎င်း၏ကောင်းစွာရကျိုးနပ်။
နံပါတ် (၁)၊ လိင်နှင့် cuddling တွင်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်၊ ၎င်းကိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊ လိင်တံ၏အမြစ်နှင့်ထိုအပန်းဖြေမှုတို့သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ အပြာရောင်ဘောလုံးများမရရန်လည်းကူညီသည်။ ဒီဟာကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလုံလုံလောက်လောက်မပြောနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာများကိုတစ်ချိန်လုံးဆက်လက်အာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းအရသာရှိရှိအရာအားလုံးအပေါ်လည်းကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအာရုံစိုက်နေစဉ်။
လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းအစွန်းမှဒါအနီးကပ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တက်အလုပ်မ #2 ။ သငျသညျ #1 မှာကောင်းသော get လျှင်မူကား, သင်တော်တော်လေးနီးစပ်ရနိုင်သည်။ ငါတော့ဘူးအပြာရောင်ဘောလုံး get နဲ့ကျွန်မ #1 technique ကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာ Karezza ၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
Vasocongestion AKA အပြာရောင်ဘောလုံး
အမျိုးသမီးများသည်နာကျင်စေသော vasocongestion ဝေဒနာခံစားနိုင်သော်လည်းအမျိုးသားများကမူမကြာခဏတိုင်ကြားလေ့ရှိသည်။ သို့သော် vasocongestion သည်များသောအားဖြင့်နာကျင်မှုမရှိပါ။ နားထောင်ပါ။ လိင်နှင့်လိင်အင်္ဂါကိုနှိုးဆွသည့်အခါတိုင်း vasocongestion သည်လူတိုင်းတွင်ဖြစ်တတ်သည်။ လိင်တံသို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါသည်သွေးနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၎င်းသည်အထီးနှင့်အထီးတွင်အထွေထွေနှိုးဆွမှုဖြစ်ပေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က orgasm နှင့် / သို့မဟုတ်သုက်လွှတ်သောအခါ, vasocongestion မှရောင်ရမ်းခြင်းမှာရပ်တန့်သွားပြီးပျောက်သွားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းနှင့်နှိုးဆွပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ကအော်ဂဇင်သို့မဟုတ်သုတ်သင်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါက vasocongestion သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကပ်ပြီးနာကျင်မှုသို့မဟုတ်အဆင်မပြေမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယောက်ျားများတွင်လိင်စိတ်နိုးထစေခြင်းကိုအဓိကဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရင်းအမြစ်သည်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနောက်သို့မလိုက်သောအခါလိင်တံနှင့်ဝှေးစေ့နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင်သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ငါပြောခဲ့သည့်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး ကဤဖြစ်စဉ်ကိုတင်းမာမှုခေါင်းကိုက်ခြင်းမည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ သွေးပေါင်ချိန်တိုးသည်၊ သို့သော်သွေးမှဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားသောသွေးကြောများသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ ) သွေးကြောတင်းမာမှုအဖြစ်ကြွက်သားတင်းမာမှုအားဖြင့်။
သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်သွေးပမာဏမြင့်တက်လာခြင်းတို့သည်ကျဉ်းမြောင်းသောသွေးကြောများနှင့်တွေ့သောအခါမီးဖိုချောင် faucet အားဆိုဒါကောက်ရိုးမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းစေရန်ကြိုးစားသည့်အလား၎င်းသည်မသက်မသာဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်နာကျင်စေနိုင်သည်။ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာ“ အပြာရောင်ဘောလုံးများ” သည်သုက်ပိုးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အမျိုးသားများတွင်နာကျင်မှုသည်အ ၀ တ်များ (AKA“ ဘောလုံး”) တွင်အများဆုံးခံစားရလေ့ရှိသော်လည်းလိင်အင်္ဂါအာရုံခံအာရုံကြောအများစုသည်သန္ဓေသား၏တည်ဆောက်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ” \_ t
ဘေးထွက်မှတ်စုတစ်ခုတွင် vasocongestion အပြင်သုက်ပိုးမဟုတ်သောဆီးကြိတ်အရည်များစုပုံလာသည်။ အချို့သောအမျိုးသားများသည်ဝှေးစေ့တွင်နာကျင်မှုခံစားရခြင်း (သို့မဟုတ်) ၀ မ်းပျက်ရောဂါခံစားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာအမှန်တကယ်ဆီးကြိတ်မှလွှဲပြောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆီးကျိတ်ကိုအရည် (ခေါ်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအရည်) ဖြင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သည်နှင့်ထိုအရည်သည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပြန်လည်စုပ်ယူရန်အချိန်ယူရသည်။ ထို့ကြောင့်တရုတ်နှင့်ဂျပန်အတွေးအခေါ်ပညာသည်များစွာသော“ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ” ကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများအတွက်ယင်းကိုကျန်းမာရေးရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ပေးသူအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ အမျိုးသားတစ် ဦး သည်မိမိကိုယ်ကို ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်ပြသရန်ခဲယဉ်းသောကြောင့်၎င်းဖိအားကိုသက်သာစေရန်အတွက်ထိပုတ်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သင်၏လက်ချောင်းအားလုံးကိုယူပြီးသင်၏လက်မကိုတို့ထိလိုက်ပါ။ ထို့နောက်ရပ်နေသည့်အနေအထားတွင်သင်၏ gluteal ကြွက်သားများအလယ်တွင်အသာပုတ်ရန်လက်ျာလက်ချောင်းများနှင့်လက်မကိုအတူတကွသုံးပါ။ သစ်တော Gump ပြောသည့်အတိုင်းတင်ပါးပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါ။ sacrum ဟုခေါ်သောအရိုးနုနယ်မြေတွင်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံစားရမည်။ sacrum သည်တြိဂံကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးသင်၏အမြီးအရိုးဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှပိုမိုပါးလာသည်။ သင်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေပါကတစ်စုံတစ်ယောက်သည်“ ဆီးကျိတ်စစ်ဆေးခြင်း” ပြုလုပ်နေသည့်ခံစားမှုကိုခံစားရလိမ့်မည်။
ယခုတွင်အစတွင်အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာသည်သင်နှိပ်လိုက်သည့်တုန်ခါမှုသည်အပြင်ဘက်ရှိဆီးကြိတ်ကိုအနှိပ်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါကဆီးကြိတ်အရည် (pre-cum ဟုရည်ညွှန်း) သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ယိုယွင်းသွားလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ပင် လိင်တံ၏အစွန်အဖျား (သင်၏ Urethra) မှယိုစိမ့်စေသော။ ၎င်းသည်ဆီးကြိတ်ခြင်းနှင့်ဆီးကျိတ်ဂလင်းကိုနှိုးဆွခြင်းလွန်ကဲသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောဆီးကြိတ်နှင့်သုက်ရည်ပြွန်အတွင်းပိတ်မိနေသောအရည်အချို့ကိုထုတ်လွှတ်ပေးရန်ကူညီသည်။ သင်အဲဒီလိုလုပ်ပြီးနောက်ဆီးဆီးသွားရန် (သို့) ဆီးကြိတ်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်လိုသည့်ဆန္ဒရှိရန်တောင်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ (ဒါကြောင့်ငါဆီးသွားပြီးနောက်သို့မဟုတ်သင်ရေချိုးခန်းထဲ၌ရှိနေစဉ်ဤနှိပ်ခြင်းကိုအထူးအကြံပြုလိုပါတယ်) ။
၎င်းသည်အာရုံကြောများနှင့်ထိုပြွန်များအတွင်းရှိစီးဆင်းနေသောအရည်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူနှင့်အတူစကားပြောဆိုပြီးလေ့လာမှုပြုလုပ်နေစဉ်မှာ testicular နာကျင်မှုအားလုံး (stimulatory or have) သည်ဆီးကြိတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သုက်ပိုးတည်ဆောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်မှုကိုယ်နှိုက်ကအဖြေမဟုတ်ပါ၊ ဒီတော့ယောက်ျားတွေ၊ ဒီဟာကိုစမ်းကြည့်ကြည့်ပါ ဦး ။ ငါသိတဲ့ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကိုဒီအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ သူကယောက်ျားတချို့ရှိသေးတယ်။ သူကသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနာကျင်တာ၊